Tartanka u dhaxeeya dabo wasakh ka nadiif-ah iyo maskax wahmi ka nadiif-ah – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Tartanka u dhaxeeya dabo wasakh ka nadiif-ah iyo maskax wahmi ka nadiif-ah
“Ninka dayaxa tegey saxarada iskama mayro’ hadal sidaas ah ama u dhow waxaa yiri Shiikha aan qaddarinta weyn u hayo ee Mustafe Ismaaciil Haaruun. Shiikhu wuxuu kale oo yiri ‘nin gaal ahaan jirey oo soo islaamay ayaa la weydiiyey waxa iska beddeley. Isna wuxuu ku jawaabey in markuu seexdo oo bustaha huwado qurunkii naftiisa uga soo uri jirey uu ka raystay’.
Nadaafaddu waa wax wanaagsan, qofkii ama bulshadii nadaafad-darro dhaqan u tahay na waa lagu dhaliili karaa. Ha ahaato ee waxaa is weydii leh: Istijadu ma noqon kartaa diillinta kala soocda ama halbeegga kala qaybiya dadka wanaagsan iyo dadka xun; dadka horay u maray iyo dadka dib u dhacay; dadka caqligu hago iyo dadka caadifaddu hagto?
Ninkaa dayaxa raadkiisa dhigay, kii daawada antibayootigga ah habeeyey iyo kii moobaylka(wareegaa) lagu hadlo sameeyey intuba waxay ahaayeen buuryaqab aan darab qabin markii ay hawshaas qabanayeen. Laakiin, caalamka waxa gaarey waxna u kordhiyey waa horumarkii ay sameeyeen, ee dabadoodii iyo xaaladdii ay ku sugnayd iyaga ayey ku hartay.
Waxaa laga yaabaa in shiikhu uu bulshada niyadda u dhisayey oo matalan, haddii gaal caddaan ahi ku yiraahdo ‘ annagu horumar aan la koobi karin ayaan dunida ku soo kordhinney, ee idinku maxaad tarteen caalamka?’ in iyagoo indhaha galka ka soo saaraya, kalsooniyi na shafkooda buuxisey ay yiraahdaan ‘ annagu waannu istijoonnaa’
Maadaama diinta iyo wadaaddada afhayeenka u ah midkood na aan su’aalo badan laga keeni karin waxay sheegaan, ayey arrini ku soo dambeysey in wadaaddadu dadka dhegeysta ula hadlaan sida ubadka ababiska (nursery) ku jira oo hadallo koolkoolin iyo niyad-dhis ah dhegaha uga afuufaan. Hadalka shiikhu istijada ku boqray, tegidda dayaxa na ku casiley, cidda keliya oo calaf moodi kartaa waa dadka waxa loo sheego aan su’aal iska weyddiin ee dhegaha ka hoggaansama. Laakiin, dadka fekera shiikhu wuu qadiyey oo ma sooryayn markuu hadalkaas lahaa wuu na carraabiyey.
Ugu dambayn, dunida waxa la isku dhaafay ma aha dabo wasakh ka nadiif ah, ee waa maskax wahmi ka nadiif ah.”
Xigasho: Maxamed Ciraale
Islaam-ku miyuu leeyahay dhar gooni ah
Maxaa cadeen u ah run ahaanta xadiiska